बौद्ध विश्वविद्यालय र गौतमबुद्ध विमानस्थलबीच सहकार्य ~ Lumbini Buddhist University
Lumbini Buddhist University - News - बौद्ध विश्वविद्यालय र गौतमबुद्ध विमानस्थलबीच सहकार्य
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलबीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । २०७९ जेठ १२ गते विश्वविद्यालयको सभाहलमा आयोजित एक समारोहकाबीच दुई संस्थाबीच सहकार्य सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्य र गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलका महाप्रवन्धक गोविन्दप्रसाद धितालले हस्तारक्षर गर्नुभयो ।
यो सम्झौतापछि बौद्ध विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पस लुम्बिनी र सिटी कलेज बुटवलमा स्नातक तहमा ट्राभल एण्ड टुरिजम विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु इन्टर्नसीपका लागि गौतमबुद्ध अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा जानेछन् । चालु शैक्षिक सत्रमै १३ जना विद्यार्थी अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा सिकाई अभ्यासमा खटिनेछन् ।
सम्झौतापछि दुबै संस्थाहरुबीच इन्टर्नसीप, स्वयम्सेवक परिचालन, संयुक्त सभा गोष्ठीहरु, अनुभव आदानप्रदान तथा पर्यटन एवं बौद्ध दर्शनसम्बन्धी विभिन्न समारोह हुनेछन् । विश्वविद्यालयले बिटिटिएमका विद्यार्थीहरुलाई इन्र्टनसीप र भोट बुद्धिन्म र ग्रामिण विकासका विद्यार्थीहरुलाई स्वयमसेवकको रुपमा विमानस्थलमा पठाउनेछ । गौतमबुद्ध विमानस्थलले नियमानुसार विद्यार्थीलाई इन्टर्नसीपमा सहभागी गराउनेछ । यो सहकार्य सम्झौता चार वर्षसम्म कायम रहनेछ ।
सो कार्यक्रममा बोल्दै बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुपति प्रा.डा. हृदयरत्न बज्राचार्यले विश्वविद्यालय र बिमानस्थलबीचको सम्झौताले बौद्ध क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने बताउनुभयो । विद्यार्थीहरुले बौद्ध क्षेत्रको जानकारी दिन सक्ने तथा पर्यटकका लागि सहजीकरण समेत गर्न सक्ने भएकाले यो सम्झौताले दुबै पक्षलाई लाभ हुने उहाँले बताउनुभयो ।